Tapaho - Ny fomba mandeha mafy amin'ity fahavaratra ity | Bezzia
Miverina miverina amin'ity fahavaratra ity ny fanapahana tapaka
Susana godoy | 13/05/2022 10:00 | Inona no hotafiko
Hitantsika izany na dia tao amin'ny mpanjaka aza ary misy indray ny fanapahana tapaka efa rava amin'ity vanim-potoana vaovao ity. Ny akanjo toy ny akanjo na jumpsuit dia mitolo-batana aminy tsy mbola nisy toy izany. Ny borosy ny originality sy ny loko izay ho hita isan'andro amin'ny lohataona ary mazava ho azy, ny fahavaratra nandrasana hatry ny ela.
Hevitra tonga lafatra sy tany am-boalohany, izay hanasongadina ny ampahany amin'ny vatana ary hamita azy amin'ny loko tsotra, miaraka amin'ny printy na mitambatra amin'ny akanjo mahazatra indrindra. Noho izany, raha te-hahita fanangonana tsara amin'izany rehetra izany ianao, dia tsy misy tahaka ilay natolotra antsika Stradivari, satria mamely foana ny safidy rehetra asehony amintsika. Aza adino izany!
1 Hetezo ny akanjo misy peratra
2 Akanjo vita pirinty miaraka amin'ny vozony malalaka amin'ny lamosina
3 Akanjo fety fohy mavokely
4 Halter vozony jumpsuits
5 Fitafiana akanjo mainty
Hetezo ny akanjo misy peratra
Es hevitra mitovy amin'ilay nanaovan'ny mpanjakavavy Letizia. Na dia tapaka aza ny fironana, dia tokony ho lazaina ihany koa fa manampy ny originality sy ny fomba tsara na aiza na aiza alehanao. Noho izany, na ny mpanjaka aza dia sahy manana hevitra tany am-boalohany toy izany. Amin'ity tranga ity dia manana dikan-teny mitovy amin'izany i Stradivarius fa amin'ny tanany fohy ary misy fotsy manjaka. Loko fototra sy tena mendri-piderana ho an'ny fotoana manomboka mampiseho ny hoditra tanned. Miaraka amin'ny zipo evasé sy bodice mampahazo aina miaraka amin'ny vozony boribory, ny firaisan'ny roa tonta dia atsangana amin'ny alàlan'ny tapaka sy ny peratra eo anoloana izay mampiseho andiana fanangonana. Toy ny?
Akanjo vita pirinty miaraka amin'ny vozony malalaka amin'ny lamosina
Misy dikan-teny maromaro io karazana fanapahana tapaka io. Satria indraindray faritra kely ihany no hita ary amin'ny hafa dia vita amin'ny vozony malalaka eo amin'ny lamosina, toy ny tranga. Vita amin'ny vozon'akanjo halter izy io fa hitondra any amin'ny lamosina miboridana izany. Mazava ho azy, ny akanjo mihitsy no tena mahazo aina, noho ny elastika tarika manana. Izy io koa dia aseho amin'ny lamba malefaka sy miaraka amin'ny printy voninkazo izay voamarika noho ny fitambaran'ny alokaloka. Iray amin'ireo hevitra izay tsy ho azonao toherina amin'ity vanim-potoana ity.
Akanjo fety fohy mavokely
Ny fomban'ny fety dia tsy ho very ao amin'ny fanangonana fahavaratra tahaka ity iray ity. Satria ny satin vita dia ho hita amin'ity akanjo fohy ity miaraka amin'ny aloky ny mavokely izay hahatonga anao ho raiki-pitia. Mazava ho azy fa tsy izany ihany fa manana a hazo fijaliana rhinestone izay hanome hazavana bebe kokoa ny akanjo mihitsy. Vao mahita azy dia manomboka miseho ny faniriana hanao fety. Ankehitriny ny hany tsy maintsy ataonao dia mameno ny bika aman'endrinao amin'ny kojakoja volafotsy sasany ary ho vonona ny hankafy ny alina tsara indrindra ianao.
Halter vozony jumpsuits
Ho fanampin'ny fanapahana ny tenany, izay ny protagonista ankehitriny, dia tsy afaka manadino momba ny necklines. Toa ny famaranana halter no tena zava-dehibe amin'ny fironana tahaka izao. Satria afaka mahita izany be dia be isika amin'ny akanjo toy ny amin'ny gidro. Ankehitriny dia ireto farany no mpandray anjara, satria izy ireo koa dia hita amin'ny loko fototra sy ny loko marevaka. Miaraka amin'ny fehin-tongotra midadasika, dia ho tonga lafatra izy ireo hitafy amin'ny fotoana samihafa amin'ny andro sy ny alina.
Fitafiana akanjo mainty
Ny akanjo mainty dia tsy mety diso ary noho izany antony izany, Stradivarius koa dia manana ny azy manokana izay tiantsika. Satria manana endriny mifanaraka amin'izany izy, izay hifanaraka amin'ny silhouette anao ary hamaritra azy tsy mbola nisy toy izany. Ho fanampin'ireo fanapahana teo amin'ny andaniny roa amin'ny andilana izay hitantsika be dia be ary izay indray, dia aseho amin'ny fomba an-kolaka. Hevitra tonga lafatra ny hanaovana miaraka amin'ny fomba isan-karazany, arakaraka ny fitaovana ampianao. Avelanay amin'ny safidinao izany!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » Inona no hotafiko » Miverina miverina amin'ity fahavaratra ity ny fanapahana tapaka
Tops crochet, fironana amin'ny fahavaratra